Abwaan Siciid Gahayr Oo Maqaal Uu Ka Qoray Wasaarada Duulista Xabsiga Ugu Jira |
Abwaan Siciid Gahayr Oo Maqaal Uu Ka Qoray Wasaarada Duulista Xabsiga Ugu Jira
Hargeisa(GNN):–Xabsi ku yaala Magaaladda hargeysa ayaa waxa lagu soo xidhay abwaan Siciid Maxamuud Gahayr oo dhinaca kale ka mid ah macalimiinta dugsiyada sare ee hargeysa ku yaala qaarkood wax ka dhiga.hqdefault
Xadhiga Abwaan siciid Maxamuud Gahayr ayaa waxa la sheegay in uu ka dambeeyeen masuuliyiinta wasaarada duulista hawada iuyo garoonka diyaaradaha ee hargeysa, kuwaas oo ka damqaday qalinkiisa.
Abwaanka ayaa su’aalo door ah iska waydiiyay bog cada uu ku yaalo garoonka diyaaradaha ee hargeysa iyo faa’iidada ugu jirta, waxaana u soo baxday isla markaana uu qalinkiisa ku muujiyay sida ay ugu dulman yihiin dadka deegaanka ku hareeraysan.
Hadaba Maqaalka uu abwaan siciid Maxamuud Gahayr Xadhiga ku mutaystay oo dhamaystirani waa kan hoos ku qoran ee ila dhugo.
Bishii Disember ee sannadkii 2015ka ayaanu si waafi ah isu wareysannay masuul ka tirsan Madaarka Hargeysa, annaga oo wadaagnay xogaha dahsoon iyo xaaladaha ka jira gegada diyaaraduhu ka haadaan, marka laga yimaaddo adeegga guud ee uu shacabka u qabto, jaallahani waxa uu ii sheegay in gegada Cigaal ay tahay meel ay dano gaar ah ka fushadaan masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda Somaliland iyo Wasaaradda Duulistu. “Waxa si sharci-darro ah looga dhoofiyaa dad tegaya dhulal uu qalalaase ka jiro, waxaana laga qaadaa $1000 qofkiiba. Ragga qaar ayaa maalintiiba ku xisaabtama $2000. Si loo qariyo halka ay tegayaan, waxa loo jaraa tigidh been-abuur ah, kaas oo muujinaya inay waxbarasho u socdaan” ayaa uu yidhi masuulkani. Marka arrinku sidaas yahay, miyaan la odhan karin “Madaarkii Cigaal waxa uu u gacan-galay Magafeyaal ku naaxa dhiigga shacabka Somaliland? Miyaanay gegada diyaaraduhu dib-u-xoreyn u baahnayn?”
Dadka Gobolka Saraar waxa ay diideen in Genel Energy ay dhulkooda shidaal ka baadho.
Buurta Siimoodi waxa ka aloosmay xiisado adag, kaddib markii la keenay niman Shiine ah oo macdanta ka ganacsada.
Lama mooggana xiisadda ka dhalatay dhismihii dekedda macmalka ah ee Ceel-gardi iyo Wareejinta dhagaraysan ee Marsada/Dekedda Berbera
Dawladda Hoose ee Gebiley waxa ay kab xooggan ka heshaa kastamka cashuuraha ee Kala-baydh.unnamed
Sida laga arki karo Wareysigii Barnaamijka Madasha Siyaasiga ee Universal TV uu sannadkii hore ku bixiyay Wasiirkii Hore Ee Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka Somaliland ahna Wasiirka Madaxtooyada Md Maxamuud Xaashi Cabdi, waxa ay xukuumadda KULMIYE la wareegtay dhul qiimihiisu dhan yahay saddex boqol oo milyan oo doollar ($300,000,000), dadkii laga qaadayna waxa lala galay heshiis-beenaad, lamana garanayo xilliga loo samaynayo dhul-beddel ama la qiimaynayo hantida laga qarameeyay. Waxa la-yaab ah in meelo laga leexiyay siliigga madaarka, kuwaas oo la siiyay dad xilal ka haya Wasaaradda Duulista. Illaa hadda inta aanu ognahay waxa af-garad lala gaadhay dad kooban.
Madaarka waxa la durkiyay laba jeer oo hore, iyada oo aan cidna waxba la weydiin ayaa haddana mar saddexaad la ballaadhiyay. Dadkii dhulkooda laga raray waxa lagu yidhi “Wixii dhul ah ma qiimaynaynno, wixii dhisme ah ayaanu qarashkooda celin doonnaa”. Waxa la kala furfuray dadkii guryaha ku lahaa, illaa haddana war sugan lagama hayo. Waxa aad mooddaa xukuumaddu in ay xalka ka deyayso muquunin, oo aanay marnaba maslaxaad iyo waanwaan oggolayn. Haddii aan shacab iyo dawladba laga wada arrinsan danta degaanka, dadka, dawladda iyo dalka waxa dhici karta in ay meesha ka qarxaan wax aan loo baahnayni.
Habdhaqanka Wasaaradda waxa aad mooddaa in uu yahay mid ku salaysan qabyaalad, oo ay sad-bursadaan beesha ay ka soo jeedaan Madaxweynaha iyo Wasiirkii hore ee Duulista Hawadu waxa ay gegada ka sameeyeen Dhagax-shiid (crusher) iyo Macrad gawaadhida lagu iibiyo/kireeyo waxaana leh cid ay isku jufo yihiin qoyska dalka ka arrimiya, Xayeysiiskana waxa ay ku xusaan shirkado gaar ah. Qaar ka mid ah ganacsiyadani waxa ay halis ku yihiin duullimaadyada diyaaradaha ka haada ama ka soo dega Madaarka Cigaal.
Qiiqa ka baxa dhagax-shiidka Cummaani ee Madaarku waxa uu waxyeello u geystay caafimaadka iyo nolosha dad badan oo ku nool Maxamed Mooge. Qoysas badan ayaa ka bara-kacay guryahoodii, kaddib markii ay u adkaysan waayeen boodhka/uurada/habaaska iyo ceeryaanta ka soo baxa dhagax-shiidku. Dadka deegaanku waxa ay ka tashanayaan sidii ay maxkamad ula tiigsan lahaayeen ninkan ku macaashay dhiiggii ummadda.
Saami-qaybsiga shaqaalaha iyo xilalka kale ee ka jira Madaarka Cigaal, Wasaaradda Duulista Hawada iyo guud ahaan Haayadaha ka hawl-gala Gegada diyaaraduhu waxa uu duudsi ku yahay ummadda Somaliland. Taasna waxa masuul ka ah Wasiirkii Hore ee Duulista Hawada Maxamuud Xaashi Cabdi, xilalka ay beeshiisu haysana waxa ka mid ah: Agaasimaha Waaxda Maamulka iyo Lacagta ee Wasaaradda Duulista, Agaasimaha Waaxda hab-maamuuska (Protocol) ee Wasaaradda Duulista, Maamule-ku-xigeenka Madaarka Cigaal, Taliyaha Saldhigga Madaarka Hargeysa, Taliyaha Laanta Socdaalka ee Madaarka Hargeysa iyo qaar kale.